Tọrọ ntọala ke 1992, ekpuchi ebe 25000 square mita na na ogbako ebe 18000 square mita, Ọ nwere adaba okporo ụzọ na elu ebe na na 30 na-ewe nkeji Mbo Ningbo Lishe International Airport na naanị 25-nkeji Mbo Ningbo Port --- ama mba oké osimiri mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri na uru nke na-abụghị silting, miri-mmiri na ice-free nile n'afọ.
NJMM nwere elu equipments, zuru-fledged technology nakwa dị ka ọgaranya rụpụta na management ahụmahụ pịa-welded ígwè e ji kpachie oghere ebe karịrị 10 afọ. NJMM bụ n'etiti ole na ole na-eduga na-emepụta nwere dum mmepụta usoro si agba mmanya kpaliri ígwè e ji kpachie oghere.
The ngwa mmepe nke sayensị ọgbara ọhụrụ na nkà na ụzụ, ahịa maka ngwaahịa na ọrụ aghọwanye achọ, iji hụ na àgwà nke tupu ire ọrụ, ụlọ ọrụ nwere rigorous nhọrọ usoro ọhụrụ Isonye ọrụ, ma na-enye a dịgasị iche iche nke ọrụ ọzụzụ na ohere na-amụ ná mba ọzọ na oru pesonel. Company ka "ịrụ ọrụ nke ọma ma dị irè, ahịa mbụ" ọrụ Aims-enye ọkachamara ndụmọdụ na oru nkwado ndị ahịa.
Quality bụ ndụ, n'echiche nke àgwà bụ mkpụrụ obi nke ndụ. Ya mere, ụlọ ọrụ a rụọ ngwaahịa mma, na igosi quality ika mmata na akpa ebe. Company na a ọkachamara quality ule ngwá ọrụ na-anwale pesonel, nzube bụ na-ekwe nkwa na àgwà ma welie competitiveness nke ụlọ ọrụ.